RED Player – REDPlayer
Abaddon HeroItemsStrategyCountersLoreHero Abaddon ဟာ Melee Strength Hero ဖြစ်သလို အသင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ ဖြည့်စွက်ကစားပေးနိုင်တဲ့ ဟီးရိုး၁ကောင်လဲဖြစ်ပါတယ်။ အားသာချက်တွေကတော့ Borrow Time ကြောင့် Battle မှာ ကြာကြာရပ်တည်နိုင်တဲ့ ဟီးရိုးဖြစ်သလို ally တွေအပေါ်မှာ လဲ health နဲ့ shield ကာကွယ်မှုတွေကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ ဟီးရိုးဖြစ်ပါတယ်။ Spell အားလုံးဟာ Cooldown နည်းတဲ့ အပြင် Team အတွက် role အားလုံးကို ၀င်ဆော့ပေးနိုင်တဲ့ ဟီးရိုးလဲဖြစ်ပါတယ်။…
Alchemist HeroItemsStrategyCountersLoreHero Alchemist ဟာ Carry , Support , Durable , Disabler , Initiator , Nuker အစရှိသည်ဖြင့် ကစားနိုင်တဲ့ ဟီးရိုးတစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အားသာချက်ကတော့ ပါဝင်တဲ့ Acid Spray ရဲ့ AOE Damage အပြင် Armor လျှော့နည်းစေမှု ၊ Greevil's Greed ကနေရတဲ့ Bonus Gold တွေကြောင့် Alchemist ကို လွယ်ကူစွာ Farm နိုင်တဲ့…
Ostarion, the Wraith King HeroItemsStrategyCountersLoreHero Wraith King ဟာ Melee Strength Hero ဖြစ်ပြီး Carry ကော Tank နေရာကောကိုပါ ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဟီးရိုးဖြစ်ပါတယ်။ အားသာချက်ကတော့ Wraith King ရဲ့ ulti ဖြစ်တဲ့ Reincarnation ကြောင့် Battle တွေမှာ ကြာကြာရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Battle အတော်များများ မှာလဲ ရှင်သန်ဖို့ အခွင့်အရေးများတာကြောင့် အစဆော့တဲ့ player အတော်များများအသုံးပြုဖို့အတွက် သင့်တော်တဲ့ ဟီးရိုးလဲဖြစ်ပါတယ်။…
Joseph Dumary ဆိုတဲ့သူကို ကြားဖူးချင်လည်းကြားဖူးနိုင်ပါတယ်။ မဟုတ်လည်း သူပြောတဲ့ PS5 အကြောင်းလေးဖတ်လိုက်မိလို့ပါ။ သူလိုငါလို console သမားတွေမျော်မှန်းထားတာနဲ့ Joseph လို designer တစ်ယောက်စိတ်ကူးထားတာနဲ့ ဘယ်လောက်နီးနီးစပ်စပ်ရှိနိုင်မလဲသိရတာပေါ့။ အပြင်ပိုင်းမှာတော့ အရင် ပုံစံတွေကနေ သိပ်ပြီးခွဲထွက်နေတာမျိုးမတွေ့ရပါဘူး။ (fake ကြီးလေ)။ အတွင်းပိုင်း utility နဲ့ feature တွေကိုပိုပြီး အားထည့်ထားတဲ့ ပုံစံပါပဲ။. ဖတ်မိသလောက်အချက်တစ်ချို့ကိုတော့ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။. ကိုယ်လိုချင်တာတွေ မျော်မှန်းနေတာတွေနဲ့တော့ ငြိစရာအကြောင်းလည်းသိပ်မမြင်ပါဘူး။ Smart Console : အသစ်ထွက်လာမယ့် console က gamer…
﻿Championat.com နဲ့ Natus Vincere ရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ Yevhen Zolotarov တို့ ပြောခဲ့တဲ့ interview ကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Na’Vi အနေနဲ့ Ti8 open qualifiers မှာထွက်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းနဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေပေါ့။ ပြီးတော့ NaVi အတွက် ရလဒ်တွေက media တွေပေါ်မှာ မြင်ရတဲ့ အကြောင်းတွေထက်အမြဲတမ်း ပိုအရေးကြီးကြောင်းပြောသွားပါတယ်။. ESforce ကနေထွက်တဲ့အခါ အကောင်းအဆိုးဒွန်တွဲနေကြောင်းလည်းပြောသွားပါသေးတယ်။ Ti8 qualifier ရလဒ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ အဖတ်ဆည်မရတော့တဲ့ ကိစ္စပေါ့။ ဘယ်သူမှ မထင်ထားဘူး။…